Tag: xiriirka dadweynaha | Martech Zone
Tag: xiriirka dadweynaha
Awardzee: Sida Loo Helo Abaalmarino Online ah
Khamiis, Maarso 9, 2017 Khamiis, Maarso 16, 2017 Douglas Karr
Shirkadaha xiriirka dadweynaha marwalba waxay fiiriyaan feejignaanta si ay u dhisaan wacyigelin iyo sumcad ugu yeeshaan macaamiishooda. Hal istiraatiijiyad weyn ayaa ah abaalmarinta soo gudbinta. Abaalmarinta waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah celceliskaaga macmiilka: Abaalmarinta waxay siisaa calafka warka wanaagsan ee xirfadlayaasha PR si ay u dejiyaan wararka iyo guryaha. Goobaha abaalmarinta iyo bandhigyada waxaa inta badan booqda dhagaystayaasha aadka u khuseeya, ballaadhinta gaadhistaada. Goobaha abaalmarinta badanaa waxay adeegsadaan garsoorayaal saameyn weyn leh, sidaa darteed sumaddaada horay u sii qaad